वीर अस्पताबाट न्याय माग्दै सत्याग्रही गंगामाया अधिकारी - Open Khabar - नेपाली अनलाइन डिजिटल पत्रिका
२०७७, ७ आश्विन बुधबार
वीर अस्पताबाट न्याय माग्दै सत्याग्रही गंगामाया अधिकारी
काठमाडौं – नेपालको सबै भन्दा पुरानो अस्पताल वीर अस्पताललाई सरकारले कोभिड उपचार केन्द्रका रुपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि गंगामाया अधिकारीलाई अस्पताल प्रशासनले निस्कन आग्रह गरेको हो। विगत ९ वर्षदेखि वीर अस्पतालमा नै बसेर न्यायका लागि सत्याग्रह गरिरहनु भएकि अधिकारीले आफुलाई अस्पतालले वेवास्ता गरेको भन्दै न्याय मागी रहेकी छिन्।
सरकारले वीर अस्पतालमा उपचाररत विरामीहरु लाई ट्रमा सेन्टरमा सार्ने र जति पनि सर्वसाधारणले पाइरहेको सेवा ट्रमा सेन्टरबाट नै उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभएको छ। तर,अहिले सम्म गंगामाया अधिकारीलाई अस्पताल प्रशासनले ट्रमामा नसारेको र आफ्नो बस्ने व्यवस्था नमिलाइदिएको भन्दै गुनासो पोखेकी छिन्।
अस्पतालमा कोभिडका विरामी भर्ना गरेपछि स्वास्थ्यको जोखिम हुने र आफु बस्दै आएको क्याबिनमा कोभिडका विरामी बस्ने भएकाले क्याबिन खाली गर्नुपरेको उनले बताइन्। काठमाडौंमा आफ्नो बस्ने ठाउँ कहिँ कतै नभएको उल्लेख गर्दै अब अस्पतालले उनलाई जहाँ बस्ने व्यवस्था गर्छ त्यही बस्ने बताएकि छिन्।
कान्छा छोरा कृष्णप्रसादलाई २०६१ साल चितवनमा माओवादीले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेपछि अधिकारी न्यायका लागि सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ। छोराका हत्यारालाई कार्वाहीको माग गर्दै अनशनमा बसेकै अवस्थामा ३३४ दिनका दिन २०७१ साल असोज ६ गते उहाँका पति नन्दप्रसाद अधिकारीले प्राण त्यागेका थिए। श्रीमानको मृत्यु भएको ६ वर्षसम्म पनि अन्त्येष्टी हुन नसकेको र अहिलेसम्म पनि कहिँ कतै बाट न्याय प्राप्त नभएकोमा दुःखेसो पोख्दै आफु निरन्तर संघर्ष गरिरहने बताउछिन्।
यतिबेला सामाजिक संञ्जालमा गंगामाया अधिकारीको समर्थनमा धेरै समर्थक देखिन्छन। उनको न्यायका लागि धेरै समर्थकले सामाजिक संञ्जाल मार्फत आवाज उठाउदै आइरहेका छन्। गंगामाया माथि षड्यन्त्र रचिएको भन्दै एक सत्याग्रही माथि गर्न लागेको ज्यादतिको प्रतिकार गर्ने जस्ता आवाज उठिरहेको छ। उनको स्वास्थ्य अत्यन्तै कमजोर भएकाले उनलाई नियमित औषधि सेवन र उपचारको माग गरेका छन्। उनका आफन्त तथा समर्थकले गंगामाया बचाउ अभियानको नारा लगाउदै ‘न्यायका लागि मानव अधिकार’ मा समेत निवेदन पेस गरेका छन्।
( फोटो साभार : सामाजिक संञ्जाल )
कोरोना महामारीको अवस्थामा आयुर्वेदको बढ्दो आकर्षण, डा. सुवर्ण पौडेलको सुझाब
कोरोना संक्रमित क्याप्टेन विजय लामा, अस्पतालको बेडबाट भिडियो सन्देश
फुड बैंकको दशौं दिनमा पुर्वमंत्री तथा सांसद केशव स्थापित, राहत वितरण भोलि देखि बन्द
कतारका राजदूत नारद भारद्वाजले भने नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्न दैनिक ४ उडान चाहिन्छ
चेतना (ओजस्वी सुवेदी)
किन सिल गरियो बौडेश्वर झरना 86 views
कविता ‘झर’ को सैद्घान्तिक विर्मश तथा विकासक्रम सुरेश काफ्ले ‘विदारक’ 24 views
कुन राशी भएका श्रीमानका श्रमिती राम्रा हुन्छन ? 18 views
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए १६८ संक्रमित 13 views
कोरोना भाइरस र लकडाउनको जीवन [शान्ता पौडेल] 10 views
© 2020 - Openkhabar.com 2020. All Rights Reserved.